Roma Yakazara Hondo, QuickScan, Iyo Inodzivirira Vakafa uye mimwe yemahara kana yakadzikiswa mitambo uye maappuro kwenguva yakatarwa | IPhone nhau
Roma Yakazara Hondo, QuickScan, Iyo Inodzivirira Vakafa uye mimwe yemahara kana yakadzikiswa mitambo uye maapplication kwenguva shoma
Iye zvino tinogona kunyatso kuzvitaura nechido: Chatova Chishanu! Ukangosiya makirasi ako kana kushanda, vazhinji venyu mose muchave nemazuva maviri akazara pamberi penyu ekugumisa zvakanyanya sezvinobvira kubva kuzvisungo zvezuva nezuva, kubuda, kunakidzwa neshamwari uye mhuri, uye wadii !, ita simbe shoma, gara uchinzwa wakasarudzika. Uye kuti iwe uve nenguva yakatonyanya nani vhiki ino, nhasi muActualidad iPhone ndinokuunzira kusarudzwa kwemitambo uye maapps emahara, kana nezvakawanda zvakakosha.
Sezvo ini ndichigara ndichida kuyeuchidza munhu wese anotiverenga, usakanganwa kuti zvese zvinotevera zvinopihwa uye kukwidziridzwa Nguva Yakatemwa; Izvi zvinoreva kuti, kunze kwekumwe kusarudzika, isu tinogona kungovimbisa kushanda kwayo panguva yatinoburitsa ichi posvo, asi isu hatigone kukuudza iwe kana promo yapera nechikonzero chakareruka, mushambadzi ari mubvunzo haana kuudza. Saka dhawunirodha izvozvi (kunyanya kana zviri zvemahara) uye funga gare gare.
1 QuickScan +
2 Lumos: Zuva uye Mwedzi Tracker
3 ROMA: Yese Hondo
4 ChimiroMagic Premium - Zvese Mune Imwe Collage Mugadziri
5 Kuvhara Vakafa
6 Remote Control, Keyboard uye Trackpad yeMac [PRO]
Tinogona kutsanangura zvishoma nezve ichi chinobatsira chishandiso iwe usati watofungidzira nezita rayo. QuickScan + chishandiso chaungagone kushandisa tarisa chero gwaro uchishandisa kamera ye iPhone yako, iPad kana iPod Touch. Iyo inosanganisa zvimwe zvekuwedzera sarudzo senge otomatiki kumucheto kuona kuti zvinoita kuti zvive nyore kubvarura gwaro kana kutumira kunze muPDF kana mufananidzo fomati
QuickScan + Iyo ine yakajairwa mutengo we0,99 euros muApp Store, zvisinei ikozvino unogona kuiwana zana muzana muzana mahara.
Lumos: Zuva uye Mwedzi Tracker
Lumos chishandiso chinonakidza icho, kushandisa iyo augmented reality, inotibvumira kuona nenzira chaiyoiyo uye pakarepo nzvimbo yezuva kana kuti mwedzi panguva ipi neipi. Iwe zvakare uchakwanisa kuwana data senge kubuda kwezuva, kuvira kwezuva, kubuda kwemwedzi, mwedzi uye mwedzi chikamu kune chero zuva, uye zvese kubva kune yakapusa uye yakajeka interface.
Lumos Iine mutengo wenguva dzose we2,99 euros muApp Store, zvisinei ikozvino unogona kuzviwana mahara zvachose.
ROMA: Yese Hondo
«ROMA: Yakazara Hondo iri Isu mutambo wema epic zviyero, iyo inopa vatambi mubatanidzwa wezano nemaitiro ekurwa hondo dzinoshamisa, uku vachishandisa kudyidzana, hunyengeri uye kuuraya nzira yekukunda. "
Kunyangwe panguva ino isu tisiri kuzoiwana mahara, ivo vanozvipa ne20% dhisikaundi muApp Store, kuenda kubva kune yakajairwa € 9,99 kusvika € 7,99. Kana iwe uchitsvaga epic mutambo wezano uye mhando, uyu mukana wakanaka wekubata ROMA: Yese Hondo yakasarudzika yePadad
ChimiroMagic Premium - Zvese Mune Imwe Collage Mugadziri
FrameMagic chishandiso chinoshamisa che iPhone nePadad chaunogona gadzira inoshamisa foto, vhidhiyo, uye slideshow collages nekukurumidza uye nyore uye kusanganisira "matani ezvigadzirwa, sarudzo dzisingagumi, mavara, mapatani, ane simba mavara edhitaira, akanaka mafirita mhedzisiro, anoshanduka mutambo sarudzo, mimhanzi uye rondedzero."
FrameMagic Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store, zvakadaro ikozvino unogona kuiwana mahara.
"The Kuvhara Vakafa" iri zombie dambanemazwi mutambo. Iyo ine anopfuura makumi manomwe mazinga uye zvakavanzika hazvisi kurega uropi huwire kubva pachikuva. Mutambo unonakidza uye unovaraidza wenguva yekumirira.
Kuvhara Vakafa Iine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store, zvakadaro ikozvino unogona kuiwana mahara.
Remote Control, Keyboard uye Trackpad yeMac [PRO]
Zvekare zvakare isu tiri pakupa ichi chikuru chinobatsira icho inoshandura yedu iPhone kana yedu iPad yakanaka uye yakazara trackpad uye / kana keyboard zveMac yedu.Zvakanakira patinobva pamba uye tinofanirwa kushanda zvakanaka. Asi pamusoro pezvo, zvakare iri kure kure yako Mac.
Remote control app ipapo inoshandura yako iPhone nePadad kuita yepasi rese kure kune Mac yako.
Shandisa iyo yekumusoro control application kudzora vhoriyamu pane yako Mac uye chii chiri kutamba mune akasiyana midhiya player application. Nakidzwa nekhibhodi isina waya uye trackpad inoshanda kubva chero chinhambwe mumba mako kana muhofisi. Kutanga uye kuvhara zvishandiso zvakaiswa paMac yako neimwe tap. Rongedza zviito zvekuzotevera, semuenzaniso, isa Mac yako kurara mushure mekunge bhaisikopo rapedza kutamba.
Iyi Anwendung ine mutengo wenguva dzose we € 2,99, zvisinei, ikozvino unogona kuitora kwechetatu chete chekukosha kwayo, € 0,99.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Roma Yakazara Hondo, QuickScan, Iyo Inodzivirira Vakafa uye mimwe yemahara kana yakadzikiswa mitambo uye maapplication kwenguva shoma
Midzimu yekare yakadzoka: iyo iPhone 7 matte nhema pende, iri mubvunzo
WhatsApp-nhanho yekusimbisa ikozvino yawanikwa kune wese munhu